अन्तत: तोडियो डा. केसीको १५ औ आमरण अनसन, के के भयो सहमती?
वि.सं १० श्रावण २०७५, बिहीबार २३:०१
काठमाडौं / अनसनरत डा केसीले २७ दिन पछी अनसन तो भएका छन । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका मागमा सहमति भएपछी उनले अनसन तोडेका हुन् । उनको अनसन माथेमा र नेम्वाङले जुस पियाएर तोडेका थिए।
डा केसी अनसनरट टिचिङ अस्पतालमा सरकार पक्षसंग २२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षार भएको छ। समझदारीअनुसार १० वर्षसम्म काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, अध्यादेशअनुसार नै चिकित्साशास्त्र विधेयक ल्याइने, विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्नेलगायतका बुँदा रहेका छन् ।
यो सहमतिसँगै डा.केसीले राखेका अधिकांश माग पूरा भएका छन्।
डा केसीले अनसन तोड्दै, सरकार केसी बीच ९ बुदे सहमती
आज गुरु पूर्णिमा, शिक्षा प्रदान गुरुप्रति सम्मानभाव प्रकट गरी मनाइदै